Blọọgụ & Osisi okooko osisi: Mkpụrụ, Igbo, Pollinate na Too | Martech Zone
Thursday, August 31, 2006 Fraịde, Septemba 1, 2006 Douglas Karr
Otu n'ime ndị isi otu ọrụ gwara m okwu banyere akwụkwọ ọ gụrụ nke na-enye ihe akaebe na-egosi na echiche ole na ole bụ n'ezie. N'abalị ikpeazụ m dere ntinye na M Họrọ Indy! ime ka ndi mmadu mara ihe m bu n’obi na saiti a. Ebe ọ bụ na ndị na-ege ntị abụghị nke teknụzụ, achọrọ m itinye ozi ahụ na ihe atụ nke ga-enye nkọwa doro anya. Ebe ọ bụ na amaara Indiana maka ọrụ ugbo, ahọpụtara m Mkpụrụ, Igbo, Pollinate na Too.
Echiche ahụ rutere m ka m na-ele ebe nrụọrụ weebụ 2.0 na saịtị ọzọ. Ana m arịọ mgbaghara maka echetaghị onye isi ahụ kwuru ya, mana ọ kpọtụrụ 'mkpụrụ & ahịhịa' maka iwulite azụmaahịa ọhụrụ na net. Emere m ya ka n'ihu n'okwu banyere etu m ga-esi too M Họrọ Indy!
Blogs & Blossoms: Ndị na-elekọta ubi na-eji usoro ndị a eme ihe ruo otu narị afọ. Anyị bụ naanị ụdị ọhụrụ ahụ.
I nwere ike ịgụ nke m ntinye karịrị na saịtị ahụ, mana ọ nwere ike ịdaba na blọọgụ ọ bụla:
Mkpụrụ: Mustkwesịrị ịnye ndị na - agụ akwụkwọ gị ọdịnaya bara uru. Nke a na-akụ mkpụrụ maka ha ịlaghachi, yana ndị ọhụrụ na-agụ akwụkwọ ịchọta gị.
Igbo: I ghaghi idozi olu gi na imewe gi. Na mpụga nke ederede na ọchị, vidiyo Colbert, ma ọ bụ ezumike ezinụlọ gị… ịkwesịrị inye ndị na-agụ akwụkwọ gị ozi ha tụrụ anya n'aka gị.
Mgbawa: Olu gị ga-ebufe blog gị. Ndị na-ede blọgụ na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ ha, na blọọgụ ndị ọzọ, na akụkọ… ha na-eme ya. Gbakwunye ihe na ikwupụta echiche gị nke posts ndị ọzọ site na iji trackbacks na-emetụta weebụ na mkpụrụ gị. Nakwa, lebara ndị na-atụba mkpụrụ n'ụzọ gị anya… ọ dị mkpa na ị ga-amata ha. Gingde blọgụ bụ nkwukọrịta = ụzọ abụọ.
Too: Ihe ọkụkụ gị (ịgụ akwụkwọ) ga-eto ka ị na-aga n'ihu na-agha mkpụrụ, ahịhịa, na pollinate. Uto so kwa na oru diri gi. Zụlite nka gị ma bulie netwọkụ gị. Lelee blọọgụ gị nke ọma na-eji ngwaọrụ nyocha nke ọma ka ị wee jide n'aka na ị na-aga n'ụzọ ziri ezi.
E nwere ya! Blọọgụ & okooko osisi. Deployedzọ nke ndị ọrụ ubi gbara kemgbe ọtụtụ narị afọ adịghị iche na usoro ịkwesịrị iji wuo blog nke ọma. Anyị bụ ndị ọhụrụ ụdị nke gardeners. Ihe ọkụkụ anyị bụ ọgụgụ, fatịlaịza anyị bụ ozi, mkpụrụ anyị bụ posts, ubi anyị bụ blọgụ anyị, ahịhịa anyị bụ asọmpi, mgbado na-adịghị mma na atụmatụ adịghị mma, na usoro ntinye akwụkwọ anyị bụ nkwupụta, trackbacks, njikarịcha njin ọchụchọ na njikarịcha mmekọrịta mmekọrịta.
Soro iwu dị mfe nke ugbo na blọọgụ gị ga-ama okooko!